Ahoana ny fomba hanoratan-dahatsoratra horonantsary manazava mahery sy mahomby
Zoma, Jolay 24, 2020 Zoma, Jolay 24, 2020 Douglas Karr
Mamarana ny famokarana mpanazava horonantsary iray ho an'ny mpanjifantsika amin'ity herinandro ity aho. Dingana tsotra izy io, saingy tena nilaiko ny nanenjana ny script mba hahazoana antoka fa fohy, misy akony ary feno araka izay azo atao izany mba hahazoana antoka fa misy akony lehibe indrindra ilay horonantsary manazava. Statistika momba ny horonantsary Explainer Amin'ny salan'isa, ny mpijery mijery 46.2 segondra amin'ny horonantsary manazava 60-segondra Ny toerana mamy ho an'ny halavan'ny horonantsary manazava dia 60-120
Asabotsy, Septambra 2, 2017 Asabotsy, Septambra 2, 2017 Douglas Karr
Ny masoivohoko dia nanolotra asa an-tsary vitsivitsy ho an'ny mpanjifanay. Nahazo valiny mahatalanjona izahay nandritra ny taona maro rehefa nampiasa azy ireo, saingy niovaova be ny vidiny. Na dia toa mahitsy be aza ny horonantsary mpanazava iray, dia betsaka ny ampahany mihetsiketsika hiaraka amina horonantsary manazava mahomby: Script - script iray mamantatra ny olana, manome vahaolana, manavaka ny marika, ary manery ny mpijery handray andraikitra